HomeWararka CiyaarahaParis Saint-Germain oo wadahadalo la furtay Zinedine Zidane.
November 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa in ay wadahadalo la bilowday Zinedine Zidane oo ku aadan xilka tababarenimo ee kooxda reer France.
Mauricio Pochettino ayaa la filayaa inuu sii joogo kooxda inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, iyadoo Manchester United magacowday Ralf Rangnick qaab ku meel gaar ah.
Si kastaba ha ahaatee, Red Devils ayay u badan tahay inay bartilmaameed ka dhigtaan Pochettino xagaaga soo aadan, macalinka reer Argentina ayaana u muuqda inuu diyaar u yahay inuu ku biiro Old Trafford .
Sida laga soo xigtay Le Parisien , PSG ayaa wadahadalo kula jirta Zidane oo ku saabsan doorka tababarenimo, kaasoo la filayo inuu diyaar noqdo dhamaadka xilli ciyaareedka 2021-22.
Zidane ayaa boos la’aan ahaa tan iyo markii uu ka tagay Real Madrid horaantii sanadkan waxaana warar kala duwan ay sheegayaan in uu sugayo badalka Didier Deschamps ee France .
Si kastaba ha ahaatee, 49-sano jirkaan ayaa la rumeysan yahay inuu u furan yahay inuu ku laabto kubadda cagta si uu u maamulo PSG, kuwaas oo u muuqda inay dejinayaan qorshe Pochettino oo la filayo inuu u wareego horyaalka Ingariiska